जव सडकमा मास्कको अण्डरवेयर मात्र लगाएर निस्किए पुरुषतस्विर सहित – Naya Kura Daily
July 26, 2020 2166
काठमाडौं । कोरोनाका कारण अहिले अधिकांश मुलुकले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै आफ्ना नियमित काम गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका छन् । चीनवाट सुरु भएको कोरोना ८ महिना यता विश्वव्यापी भएको छ । तर पनि कोरोनाको कहरले छोडेको छैन ।
अमेरिका, भारत लगायतका मुलुकमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ । लामो समय लकडाउन गर्न सम्भव नभएका कारण कतिपय मुलुकले स्वास्थ्य सचेतना अपनाउदै नियमित काम गर्न आग्रह गर्दै लकडाउन हटाएका छन् ।
वाहिर निस्कदा माक्स, पञ्जा लगाउन र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तो बेलामा बेलायतमा भएको एउटा घटनाले सबैको ध्यान तानेको छ । राजधानी लण्डन सहरमा अहिले कोरोनाको प्रभाव तिब्र छ । सरकारले माक्स अनिवार्य गरेको छ । यस्तो अवस्थाका बीच एक जना ब्यक्ति माक्स आफ्नो गो प्य अं’गमा लगाएर शहर निस्केका छ्रन । उनी भिडभाड भएको र महिलाका समुहमा पनि ढुक्कसंग गो’प्य अं’ग छो’प्नेगरी माक्स लगाएर हिडेका देखिन्छन् ।
उनी को हुन् र किन यस्तो गरेका हुन् भन्ने खुलेको छैन । तर उनको यो तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । परिचय समेत नखुलेका पुरुषलाई त्यस्तो अवस्थामा निर्धक्क हिडेको देख्नेहरुले तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा अपलोठउड गरेका छन् । माक्सको पे’न्टी लगाएर हिडेका ति ब्यक्तिलाई अहिले सम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर पनि आएको छैन । अक्सफोर्ड स्ट्रिटको नजिकै टहलिएको देखिएका ती युवकको तस्वीर सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको छ । तस्विर तल हेर्नुहोस
Prevआइतवारको दिन सूर्य देवको यि १२ मन्त्रको उच्चारण सहित उपासना गर्नाले मिल्नेछ चमत्कारीक लाभ !
Nextचोरको नयाँ शैली : स्कुटरको डिकीबाट पैसा गायब !
‘केजीएफ २’ को नयाँ पोस्टर रिलिज, सञ्जय दत्तको दमदार लूक
विराटनगर र वीरगञ्जमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका २ जनाको शव सेनालाई जिम्मा लगाइयो